HANGUMA NUUTI JABAANNU, SHIRRI DIINAAS JABAACHU HUBADHU!! – Oromedia
Home » Marii » HANGUMA NUUTI JABAANNU, SHIRRI DIINAAS JABAACHU HUBADHU!!
Har’aa qabsoon keenya OPDO raasaa jiraachuu fi haasaa duraan haasa’aa jiran isaan geeddarsiisaa jiraachuu argaa jirra. OPDOn waan gaggeessaa jirtu ummata biratti haga tokko dhageetti argatuus, Oromoon itti of gatuu hin qabu. Haasaa isaanii fi gocha isaanii ammaa kanaan, waan waggoota 27 nu hojjatan hatattamaan haquufiin sirrii miti. Badii kana Oromoon waggaa 27 dura itti himaa ture. Waan inni itti himaa turee sanarra tarkaanfatanii deemuu isaaniin dhiiga dhangalaasanii jiru. Kanaaf har’as, waan itti himamaa jiruu fi isaanuu dubbachaa jiran kun haasaa fi jecha wal harkaa saamanii ummata biratti jaalala horachuuf ta’uu fi dhiisuu adda baafachuu qabna. OPDO waan deemtuuf ofiin raawwattee Ummata biraa amantaa argachuu qabdii. Osoo hojii ijoo hin eegaliin ummataan nu faana hiriiraan tarii dhugummaa of keessaa qabaachuu shakkisiisa.
Wayyaaneen akka malee badduudhaa. Waan raawwatamaa jiru hundatti of gatuu hin qabnuu. Humni akka Ummata seenuu taasifamaa jiru kun, boruu deebisee nu miidhuu danda’a. Namoonni har’aa aangoon qabatanii asi nutti baasaa jiran, ummata akka hawwatanii fi keessa Qeerroo eega ittin seenanii waa hundaa baranii booda isaaniin achirraa kaasanii, Qeerroo dhabamsiisuuf ofii itti darbuu danda’uu of eeggadhaa. Wayyaaneen akka malee hamtuudhaa. Shira wayyaanee kana Lammaan ykn abbaa duulaan beeku dhiisuu malu. Ummata akka hawwataniif qofaa ergamanii ta’aa. Waan barbaadan ega argatanii booda wayyaaneen hunda isaanii ni kaaftii.
Gama biraan Sochiin OPDO keessaan gaggeeffamaa jiru, qophii filannoo 2020 natti fakkaata. Humni OPDO waliin marii araaraa gochuu barbaadu biyya alaa kana waan jiran natti fakkaata. OPDOn karaa sirrii jirtii jedhamee akka biyyatti seenamuu fi humni seenuu sunis qeerroo kan of harkaa qaba jedhu ta’uu danda’aa of eeggadhaa. OPDOn of dandeessee gaaffii Ummata Oromoo deebisuu qabdii. OPDOn Fedaraala keessaa guuramanii ba’an iyyuu, miidhaan geesisuu hin jiru. inumaa Oromiyaa humna waraanaa jala galchuuf karaa saaqa. Sochiin isaanii kun jijjiirama buqqaasaa fiduu qaba.
Previous: HAMBAA BARDHEENGADDAA
Next: Tokkummaan Ulee Lun’aa Ta’uu Hin Qabu!